Apg29 - (MY) | Apg29
881 online! | Sidvisningar idag: 68 063 | Igår: 162 965 |
အားဖြင့် Reader ကိုမေးလ် Katty
ကျနော်တို့ကသူတို့နေအိမ်များမှရွှေ့ပြောင်းခဲ့ကြသူသားကောင်များအဘို့ဆုတောငျးရမညျခံစားရတယ်။ သူတို့သညျယရှေုကိုသိသူနှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆကျဆံရေးရှိရကြောင်း, သူတို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခဲ့ကြသည်!
သစ်တောမီးလောင်မှု - ဆွီဒင်ဆန့်ကျင်သညျဘု
တို့ကမှတ်ချက် Rune က Johansson
အခုတောမီးလောင်မှုငြိမ်းအေးဖို့ကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်ခက်ခဲဆွီဒင်ရင်ဆိုင်နေကြရသည်။ အများစုမှာစာရေးဆရာများယခုလူမြိုးတစျမြိုးသောကြောင့်လုပ်ရပ်များသည်ကျွန်တော်တို့ကိုဒဏျခတျသခင်ဘုရားကရယူထားခြင်း။ ကျွန်တော်တို့ကိုလက်ရှိဖြစ်ရပ်များအပေါ်အချို့သောရှုထောင့်အရကြပါစို့။
screenshot: falkopingstidning.se ။
တနေ့စဉ်အတွင်း 15 မီးလောင်မှု Arboga အတွက် landscaped ခဲ့ကြပြီ။ ဒါကြောင့်ယခုဆွီဒင်ရဲ့အဆိုးဆုံးမီးဘေးအန္တရာယ်အတွက်ဟုန်းဟုန်းတောက်လောင်အပေါငျးတို့သမီး, အရှင်ကသဘာဝအကြောင်းတရားများ၏ထုတ်ကုန်မဟုတ်ရှိပါတယ်။
အဘယ်အရာသည် Pentecostal လှုပ်ရှားမှုကော?
အားဖြင့် Reader ကိုမေးလ် Sigvard ဓား
ဒါဟာပင်တေကုတ္တေ FFS နှင့် Society ကပင်တေကုတ္တေ, ကောင်စီခေါ်နှစ်ပတ်လည်ဖြစ်လာခဲ့သည်ကတည်းကအားလုံးသမိုင်းကြောင်းသတိနှင့်စိတ်ဝင်စားကျမ်းစာပင်တေကုတ္တေ, အ Pentecostal လှုပ်ရှားမှုမှသိသာ - ထို, အဖွဲ့အစည်းလူမှုဗေဒဆိုင်ရာနှင့်ဘာသာရေးနှစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်။
နှစ်ရက်ကျော်3အစည်းအဝေးတွေပေါ်တွင်သေတ္တာသွားရောက်လည်ပတ် Nenne Lindberg, Toye Josefsson မာတင် Lindberg နှင့် Christer Åberg။ 10:00 မှာအင်္ဂါနေ့က 17 ဇူလိုင်နဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဇူလိုင်လ 18 ရက် 14:00 နှင့် 19:00 ။
သငျသညျသုံးနည်းလမ်း Apg29 ထောကျပံ့ပေးနိုငျသညျ။
အားဖြင့် Reader ကိုမေးလ် Bertil Rosenius
Facebook ပေါ်တွင်တစ်ဦးကခေါင်းစဉ်သိချင်စိတ်ကိုနှိုးဆွ: "ဆောင်းဦးခုနှစ်တွင်ဆွီဒင်ပထမဦးဆုံးပြည်နယ်-ရန်ပုံငွေအီမာမ်ပညာရေးပါပဲ။ " စစ်မှန်သောသို့မဟုတ်မှားယွင်းသော? စစ်မှန်သော! သငျသညျသမိုငျးသို့ငုပ်သည့်အခါဒါပေမယ့်အားလုံးပင်ပိုမိုဆိုးရွားဖြစ်လာ!
သင်တန်း၏ကပ်ဘေးဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှု - အပိ
သင်တန်းတစ်ဦးကပြောင်းလဲမှုကိုယခုကြီးကျယ်သောအကျိုးဆက်များရှိသည်နိုင်ယေရှုကြွလာတော်၏ကွှေးကျွောခွငျးနှငျ့ ပတျသကျ. ကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်။
Almedalen - Dance & လမ်းရထားနှင့် Christer Åbergနှင့်အတူအင်တာဗျူး
ရုပ်ရှင်ပွဲတော် Group မှလာသောသေတ္တာ Almedalen 2018th ၌ငါ့ကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်း Flip
"အိုငါ့ဝိညာဉ်, သခင်ဘုရားကိုကောင်းကြီးပေးခြင်းနှင့် မမေ့လျော့ အပေါင်းတို့သည်သူ၏အကြိုးကြေးဇူးမြား" ဆာလံ။ 103: 2
ဒီမျက်မှောက်၌ပွဲဝင်သောမြင်သောသူကလေးများတံဆိပ် Add ...
ကျွန်မရဲ့ကျမ်းကိုဖတ်ရှုခဲ့သည်။ 17-19: ငါယောလ 1 ရက်မှဤကျမ်းပိုဒ်မှရောက်လာသောအခါ
Jimmy Akesson အဘို့အမေးပါ
by Bertil Rosenius
ကျနော်တို့ကြောင်း Jimmy Akesson ဆုတောင်းပဌနာသင့်ကြောင်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ယခုခံစားရတယ် ...
ပြီးခဲ့သည့်ရိုမန်ကက်သလစ်ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးကမျြးစာအန္တိခရစ်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု 1990 ခုနှစ်တွင်ယခင်ကက်သလစ်ဂျပန်သို့ Alberto Rivera ပရောဖက်ပြု။
ငါတကျိပ်နှစ်ပါးယောက်ျားလေးများ၏ကယ်ဆယ်ရေးအလုပ်ကိုနှင့်ထိုင်းနိုင်ငံတို့တွင်ထန်းလွမ်ဂူထဲမှာသူတို့ရဲ့ဘောလုံးနည်းပြများ၏အစီရင်ခံစာများရောက်ရှိသည့်အခါသညျယရှေုစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောမြေတွင်းထဲကကယ်တင်တော်မူ၏အကြောင်းအရာ 3,: ဒါဟာကျွန်မအကြီးကျမ်းဆာလံ 40 ၏အထင်, ဘာမျှမဟုတ်ပါ။
Jimmy Åkesson Almedalen အတွက်ကြီးမားတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုဆွဲငင
သူကစနေနေ့ညဉ့်တွင်ပြောသောအခါဆွီဒင်နိုင်ငံဒီမိုကရက်ပါတီခေါင်းဆောင် Jimmy Åkesson Almedalen အတွက်ကြီးမားတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုဆွဲငင်။
Christer Åberg Almedalen ကနေနောက်ဆုံးတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဗီဒီယိုက။ ဆွီဒင်ဒီမိုကရက်, Jimmy Åkessonနှငျ့ဘုရားသခငျရဲ့ကြွင်းသောအရာ။
Vecka 30, måndag 23 juli 2018 kl. 07:45
ဒါဟာအမေရိကန်ဧဝံဂေလိဆရာ Marjoe Gortner တစ်ဦးအတုခဲ့ကြောင်းမှတ်တမ်းတင်အချက်ဖြစ်ပါသည်။ သူသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတစ်ဝှမ်းခရီးထွက်အစည်းအဝေးတွေနဲ့စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးခဲ့ယေရှုအကြောင်းစကားပြော, ဖျားနာဘို့ဆုတောငျးလကျြ, ဗတ္တိဇံကိုမှတက်ကိုလူကဦးဆောင်, ဒါပေမယ့်သူသညျဘုရားသခငျမဟုတ်သလိုယေရှုကိုမယုံကြည်ကြ၏။
Almedalsveckan အတွက်ကြာသပတေးနေ့ချွတ် Christer Åbergရဲ့ရောင်ပြန်ဟပ်မှု။ ဆွီဒင်အမျိုးနှင့်ဣသရေလအမျိုး, Resistance ၏ Nordic ကောင်စီနှင့်ခရစ်ယာန်ပါတီတန်ဖိုးများအကြားချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုမှခြိမ်းခြောက်မှုများ။
Almedalen နှင့် Elida ၏ရုပ်ပုံများအင်္ဂါနေ့, ဇူလိုင်Ɯ
နှင့်အင်္ဂါနေ့, ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့တွင် Visby အတွက် Almedalen အပတ်ပေါ်တွင်လှေ Elida ကနေတချို့ရုပ်ပုံများ။
Daniela Persin, ကောင်းကင်ဘုံ TV7 မှာရုပ်သံလိုင်းမန်နေဂျာ။
Christer Åbergရဲ့အစီရင်ခံစာ Almedalsveckan
Gotland အပေါ်သူ၏သေးငယ်တဲကိုကနေ Christer Åberg Almedalsveckan 2018th သူတို့ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုများနှင့်အတွေ့အကြုံများအပေါ်ဤအစီရင်ခံစာကိုထောက်ပံ့ပေး
ဇွန်လ 30 ရက်နေ့မှာဂျပန်ဒုံးပျံကှဲပေါက်ကွဲမှုသို့ crashing အာကာသသို့စလှေတျတျော, ဒါပေမယ့်ပြီးသားအစမှာ။
မစ္စတာ Cool fuck ဆိုတဲ့ကလေးများမာရျနတျမှပါစေ
ရုပ်ပုံ SVT ။
ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင် fuck ဆိုတဲ့ခေါ်ဝေါ်သုံးနှစ်အရွယ်သီချင်းမီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်။ ဟုတ်ကဲ့, ဒီကအရမ်းဘာသာရပ်အကြောင်းကိုဖွင့်, ဤဟာသဟုခေါ်သည်။ အဘယ်သူမျှမကဤမာရ်နတ်နှင့်သူ၏နတ်ဆိုးဖြစ်ပါတယ်။ အနည်းငယ်ပိုပြီးရွံစာသားကိုတွေ့ရှိရန်အလွန်ခက်ခဲသည်။
အခုတော့ကျွန်မရဲ့အသက်တာ၌ Gotland နှင့် Almedalsveckan ပထမဦ
ငါ့သမီး Desire နဲ့ကျွန်မ Christer Åberg။
မနက်ဖြန်ငါ Almedalsveckan စဉ်အတွင်း Gotland သွားပါ။ ဒါဟာငါကျွန်းပေါ်ပါပဲပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မအနည်းငယ်ကောင်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့သည်အစဉ်အဆက်ကတည်းကငါကျွန်းသွားတနေ့၏အိပ်မက်ကိုမြင်မက်။
- သင်တစ်ဦးသားဖွားဆရာမအဖြစ်အလုပ်လုပ်နေလျှင်မဟုတ်ရင်သင်အခြားအရာတစ်ခုခုလုပ်ဖို့ရှိသည်, ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချလုပ်ဆောင်နိုင်ဖြစ်ရပါမည်။ ဒါဟာတူညီတဲ့လိင်ရှည်ချင်ပါဘူးသူကိုယဇ်ပုရောဟိတ်အဘို့အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်, ဆှီဒငျဝန်ကြီးချုပ် Stefan Löfvenကဆိုသည်။
ရုပ်ပုံ: Aftonbladet.se ။
ရုံရက်အနည်းငယ်အတွင်းဒုတိယအကြိမ်တစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့မြေငလျင်ဆွီဒင်ကိုနှိပ်ပါ။ အဆိုပါငလျင်အနည်းငယ်အရှေ့ Kalix ၏, ထိုအပန်းဖြေ Sangis မှာဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ပြီးတာနဲ့နောက်တစ်ကြိမ်ကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာယေရှု၏စကားသတိပေးနေကြသည်။
Sedan 23:42 2013-08-16 har det varit 430 500 783 sidvisningar på Apg29!